Musangano - Shandong OBeer Machinery Equipment Co., Ltd.
Obeer ndiye anonyanya kuzivikanwa uye anotungamira mukutengesa michina yekubika doro muChina, isu tinotarisa pane yakazara huwandu hwese hwekubika dhizaini, iyo inosanganisira svinu yekubika doro, michina yekubika waini, uye mutsetse wekugadzira michero.
Iyo yekugadzira chirimwa inovhara nharaunda ye8000 mativi emamirimita, iine mashopu mana, akashongedzerwa argon gasi yekutengesa muchina, mota yekumhanyisa muchina, otomatiki uncoiler, inokombesa muchina, michina yekumonera, nezvimwewo Certified ne-yekuzvitsigira kupinza uye kunze kwenyika kurudyi, yakawana iyo ISO uye CE certification, vanopfuura gumi mainjiniya, muongorori uye brewmaster vakanyoreswa
Kuteerera kambani inosimbirira musimboti "basa rinoita kukosha, sevhisi inoita ramangwana", tevera musimboti webasa we "tsananguro yakaenzana mhando", ita nhamburiko huru mukuvandudza manejimendi uye modhi yebasa iri pamusoro pezvigadzirwa uye tekinoroji mukana. Isu tinoomerera pakudzidzira uye kusimudzira munzvimbo yehunyanzvi, kuyedza nepatinogona napo kubatsira vatengi kuhwina kwakanyanya kukosha.
Kusangana nezvinodiwa zvepamusoro pamidziyo uye nemhando yebasa, Kambani yeObeer yakapasa iyo ISO9001: 2008 chitupa chemhando yepamusoro uye neEC chitupa bvunzo dzemusika weEuropean neAmerica.
Kubva pane tenet ye "mhando seyakakosha", kambani yakanyatso gara neyakagadzirwa doro michina yekugadzira, dhizaini uye inogadzira michina yedoro inokodzera vatengi kumba nekune dzimwe nyika; iyo midziyo yakanakisa mukugadzira, yakanakisa mukuita uye nyore kushandisa, uye ndiyo yekutanga sarudzo yekubika doro remhando yepamusoro. Tine vekutanga-kirasi vesaenzi uye tekinoroji vanogadzira, yekutanga-kirasi yekubika tekinoroji, nyanzvi yekugadzira michina, yemhando yepamusoro yekugadzirisa michina, yakagadza yakakwana mushure mekutengesa sevhisi uye garandi system, uye ine yakanakisa michina yekupa uye sevhisi kugona. Nemakore ekugadzira nekushanda, iyo kambani inovavarira kupa turnkey mapurojekiti, kuona imwechete-yekumisikidza kutenga, uye kukupa iwe yakazara yakazara huwandu hweshumiro.
Gamuchirai shamwari yese yedoro huyai kuzotishanyira.